Sajoon unkaa too'annoowwanii kamshaa meeshaalee unkaa miidhagaa nuti uumu barbaannu banuu danda'a.Too'annoowwan unkaa barruu, wardaa, dhiheessa, ykn galmee HTML dabaluuf kamshatti fayyadamuu dandeessa, fakkeenyaaf qabduu maakroo kaasuu dandeessa.
Ilaali - Kamshaalee - Too'annoowwan Unka fili.
Sajoo kamshaarraa Saagi (sajoo jalqaba hin mul`anne kana dandeessisuu barbaada ta`a.):
Unkaa galmee XML (XForms) too'annoowwan wal fakkaatutti fayyadamu.
Unkaa uumuf, galmee bani akkasumas unkaa too'annoowwanii dabaluu fi ibsuuf kamshaa unkaa too'annoowwanitti fayyadami Yoo barbaadde unkaa gara kuusaa deetaatti geessisuu ni dandeessa,?kuusaa deetaa manipulate gochuuf too'annoowwaniittillee fayyadamuu dandeessu
Galmee HTML keessatti unkaa uumu yoo barbaadde, deetaa interneetirraan erguu yoo barbaadde unkaatti fayyadami.
LibreOffice only exports the form properties that are supported by the HTML version that you export to. To specify the HTML version, choose LibreOffice - PreferencesTools - Options - Load/Save - HTML Compatibility.
Too'annoo gara galmetti dabaluuf
Unkaa kamshaa too'annoowwanii irraa, sajoo too'annoo dabaluu barbaaddu cuqaasaa
Galmee keessatti, too'annoo uumuf harkisi
Dirree too'annoo arfakkuu uumuf, Yeroo harkistu furtuu shift gadi qabi.
Tarree dirree gabatee ykn galfataa gara unkaa dirree dabaluuf , man'ee gara unkaa harkiaa. Galmee barruu keessatti, Dirree unkatti dabaluuf tarjaa irraantoo harkisuu dandeessa. Asxaa dirreef galchuuf,Ajaja Ctrl yeroo irraantoo tarjaa harkistu furtuu +shift gadi qabi.
Too'annoo mirga cuqaasi akkasumas Too'annoofili. Qaaqni kan banamu iddoo amaloota too'annoo ibsitetti
Furtuu qaxxaamuraa too'annoof ibsuuf, asxaa too'annoowwanii keessatti dalduufa(~) arfii fuulduratti dabalaa.
Galmee tokkorraa gara galmee biraa too'annowwan harkisii kaa'i.Akkasumas galmeewwan jiddutti too'annoowwan garagalchi akkasumas maxxansi. Yeroo too'annoo galmee biraatirraa saagnu , LibreOffice madda deetaa sakatta'u, gosa qabiyyee, fi amaloota qabiyyee too'annoo akkasumas too'annoo caasaa yaayaa galmee galtee keessaa taasisa. Fakkeenyaaf, too'annoo qabeentota yaadannoo teessoorraa agarsiisuf ittifufuun qabeentota walfakkaatu erga gara galmee too'annoo gara garaa garagalchinee booda agarsiisuf. Amaloota kana fuula cancala DeetaaqaaqaAmaloota unkaa irraa arguu dandeenya .
Sajoon kun haalta filuuf qaree hantuutee jijjiira. ykn haalata kana kaka'uumsala godha. Haalata filataman too'annoo unkaa ammee filuuf gargaaru.
Haalata wixinee bani/cufi
Saxaxa Halataa Bani/Cufi
Amaloota too'annoo filame gulaaluuf qaaqa banaa.
Qaaqa kana keessatti kan biraa irraa ibsuu dandeesaa? Qaaqa kana keessatti kanneen biroo keessaa ibsuu dandeessa, madda deetaa fi taatewwan unkaa hundaaf.
Sanduuqota filannoo uuma. Sanduuqni filannoo dalagaa unkaa keessaa kakaasuf ykn kaka'uumsaluu ni heyyama.
Sanduuqa barruu uuma. Sanduuqni barruu dirree fayyadamaan barruu itti galchuu danda'udha. Unkaa keessatti,sanduuqota barruu deetaa mul'isa ykn naqa deetaa haaraaf ni heyyama.
Dirree dhangi'ame uuma. Dirreen dhangi'ame sanduuqa barruu naqoota fi bahoota dhangi'ame ittiin ibsuu dandeenyudha, akkasumas kan gatii fayyadamne daangessuu dandeesisudha.
Dirreen dhangi'ame Amaloota too'annoo addaa (Dhangii - Too'annoofili).
Qabduu dhiibdu uuma. Hojiin kun taatee ibsameef ajaja , akka hantuutee cuqaasuu hojirra oolchuf gargaara.
Qabduulee kanatti barruu ykn saxatoo fayyadamuu dandeessa
Qabduu filannoo uuma. Qabduulen filannnoo qabduulee gara garaa keessaa tokko dhimmamaan akka fayyadamu dandeessisa. Qabduulen filannoo hojii tokko qaban maqaa tokko qabaatu (AmalaMaqaa). Baratamoodhaan, sanduuqa gareekennuu danda'a.
Sanduuqa makaa uumaa. Sanduuqni makaan sanduuqa tarree sar-qeenxee tarree gadbuusaa wajjiin dhimmamtoonni filannoo filatanirraa. Amala dubbisqofa gara sanduuqa makaatti ramaduu dandeessa akkasumas dhimmamtoonni galfatawwan tarree keessatti argaman malee kan biroo galchuu hin danda'an. Yoo unkaan gara kuusaa deetaatti daangeffamee fi waliindhni kuusaa deetaa ka'aa ta'e, Masaka Sanduuqa Makaa n erga sanduuqa makaa galmee keessatti galee ofumaan argama.
Barruu agarsiisuf dirree uuma. Asxaawwan kun barruu duribsame qofa agarsiisuf gargaara. Galfanni dirreewwan kana keessatti hin uumaman.
Kamshaa Too'annoowwan dabalataabanuu danda'a.
KamshaaWixinee unkaa banuu danda'a.
Masakoota unkaa too'annoowwanii ofumaa banuu/dhaamsuu
Masakaan kun amaloota sanduuqota tarree,Gabatee too'annoowwanii fi too'annoowwan biraa galchuuf nu gargaara,
Ajajoota Baafata Haalqaraa
Qabduu Sarxaa uuna.
Yoo qabduu sarxaa wardaa herreegametti dabaluu barbaadde,Geessituu Xiyya garlamee qabduu sarxaa fi man'ee jiddutti uumuf cancala fuula deetaa fayyadamuu dandeessa. Akka bu'atti, yeroo qabeentaa man'ee jijjiirre, qabeentaan qabduu sarxaa ni haaromsame.Conversely,yoo gatii qabduu sarxaa jijjiirte, Qabeentaan man'ee ni haromfama.
Kabala Maraa uuma.
Amaloota asiin gadii kabala maraaf ibsuu dandeessa
Gatii Maraa xinnaa
Ulfina ykn hojjaa xinnaa kabala maraa ifteessa
Gatii maraa olaanaa
Ulfina ykn hojjaa olaanaa kabala maraa ifteessa
Durtii gatii mari
Gatii durtii kabala maraa ifteessuf, yeroo unkaan haaromfamu fayyada.
Qaabachiisa kabala maraa ifteessa, isaanis ,sarjaa ykn surdala
Hamma xiqqaa maraa kabala maraa ifteessuf dandeessisa, fakkeenyaaf, xiyyaa cuqaasun.
Hamma tarkaanfii guddaa maraa kabala maraa ifteessa, fakkeenyaaf, weyta abgudduu kabala maraa fi xiyya kabala maraa jidduu cuqaastu.
Mudatoota ceesistuu kabala marfataa gidduutti turiinsa miillii sekoondii keessaa ifteessa. Fakkeenyaaf, turiinsi yommuu qabduu xiyyaa kabala marfataa fi qabduu hantuutee gadi qabii irratti uumamu.
Halluu xiyya kabala maraa irraa ibsa
Dheerina abgudduu kabala marfataa "gatii safartuu" keessaa ifteessa. Fakkeenyaaf, gatiin ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 abgudduu kabala marfataa keessaatti walakaa kabala marfataa qabachuudhaan uumama.
Yabbina kabala maraa hojjaa kabala maraa wajjiin wal qixxaa'u taasisuuf, hammamtaa mul'ata gara Zeerootti qindeessi.
Wardii herreegaa keessatti, koronyoo kar-lamee kabala maraa fi man'ee jiddutti uumuf fuula cancala deetaa fayyadamuu dandeessa.
Qabduu akka calaqqetti mul'atu uuma. Akka lamdhiheessa saxatoo irraa hubannetti, qabduun calaqqee qabduu "normal" wajjiin amala tokko qabu.
Too'annoo calaqqee uuma. Calaqqe kuusaa deetaa irraa dabaluuf qofaaf fayyada. Galmee unkaa keessaa, double-click one of these controls to open the qaaqaSaxatoo sagi dialog to insert the image. There is also a context menu (not in design mode) with commands for inserting and deleting the image.
Calaqqeen kuusaa deetaa unkaa keessatti agarsiifama, akkasumas hanga mirgi too'annaa calaqqee hin ugguraminitti calaqqee haaran gara kuusaa deetaa saagamuu danda'a.garuu too'annoon akaakuu calaqqee dirree kuusaa deetaa mirkanuu qaba. Kanaafuu, dirree deetaa gara amaloota fooddaa fuula cancalaDeetaa galchaa.
Dirree guyyaa uuma. Yoo unkaan kuusaa deetaatti koronyate, gatiin guyyaa kuusaa deetaatirraa fudhatama.
Yoo amala "dropdown"gara dirree guyyatti ramadde, dhimmamaan kalaandara guyyaa dirree guyyaa jala jiru filu banuu danda'a. kunis kan fayyadamu dirree guyyaa dirree too'annoo gabatee wajjiin
Dirreewwan guyyaa haala salphatti dhimmamaa furtuulee xiyya olii fi gadiitin gulaalamuu danda'u. Qubannoo qarree irratti hundoofnee, guyyaa, ji'a, ykn waggaan furtuulee xiyyaatin dabalamuu ykn hir'ifamuu danda'u.
Ibsoota murtaa'aa dirreewwan guyyaa irraa.
Dirree yeroo uuma. yoo unkaan kuusaa deetaatti koronyate, gatiin yeroo unkaadhaa kuusaa deetaatirraa fudhatama.
Dirreewwan yeroo haala salphatti dhimmamaa furtuulee xiyya olii fi gadiitin gulaalamuu danda'u. Qubannoo qarree irratti hundoofnee, sa'atii, daqiiqaa, ykn sakandii furtuulee xiyyaatin dabalamuu ykn hir'ifamuu danda'u.
Qabduu filannoo faayilii kaasuu dandeessisu uumaa.
Dirree lakkoofsaa uuma. Yoo unkaan gara kuusaa deetaatti koronyate, gatiin lakkoofsa unkaa keessaa kuusaa deetaa irraa fudhatamuu danda'a.
Dirree maallaqaa uuma. Yoo unkaan gara kuusaa deetaatti koronyate, qabeentaan dirree maallaqa unkaa keessaa kuusaa deetaa irraa fudhatamuu danda'a.
Dirree sarxaa uuma. Dirreen sarxaa haguuggee gulaalli fi laataraalii qaba. Haguuggen gulaalli deetaa kam akka galchame tilmaama. Haguuggen laataraalii yeroo fe'iinsa unkaa qabeentota sarxaa dirree tilmaamuf gargaara.
Maaloo dirreewwan sarxaa sanii gara dhangii HTML tti alerguu hin danda'amanii hubadhaa
Garee too'annoowwan hedduu fakkeessuf goodayyaa uuma. Sanduuqonni garee Group boxes allow you to group option buttons in a frame.
Yoo garee goodayyaa gara galmeetti saagde, Masaka Garee Maalimaa haala salphaan garee filannoo uumuu si dandeessisu ni jalqaba.
Yaadannoo: yeroo sanduuqa garee too'annoowwan duraan argamanirra harkisuu barbaadde fi akkasumas too'annoo filachuu barbaadde,jalqaba baafata halqara sanduuqa garee banu qabda akkasumas Qindeessi - Duuba ergijedhu filadhu. akkasumas yeroo Ajaja Ctrl dhiibuudhaan toa'annoo fili.
Sanduuqotni garee taatee arguu qofaaf fayyada. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.
Gabatee too'annoo uumuf gabatee Kuusaa deetaa agarsiisu. Yoo gabatee too'annoo haaraa uumtu, Gabatee masakaa maalimaa tu argama.
Odeeffannoo addaa waa'ee gabatee too'annoo.
Kabala naannawinsa uuma.
Kaballi naannawiinsaa akka galmee ykn unkaa kuusaa deetaa keessa dabartu si dandeessisa. too'annoowwan kabala naannawinsa kanarra jiran akkuma too'annoowwan durtii kabala naannawiinsa LibreOffice keessatti hojjata.
Too'annoo xiyyeeffannoo ofumaanii
Yoo Too'annoo xiyyeeffannoo ofumaanii ka'aa ta'e,Unkaan too'annoo jalqabaa yero galmee bante kan filamudha. Yoo qabduun ka'aa ta'uu baatte,barruun baniinsa booda filama. Tarree cancalaa that you have specified determines which is the first form control.
Title is: unkaa too'annoowwanii